Mitomany An’i Ahmed Fouad Negm, ilay Poetin’ny Vahoaka i Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2013 22:21 GMT
Ahmed Fouad Negm: Revolisiona 84 taona . Sary nozarain'i @i3atef tao amin'ny Twitter
Nodimandry omaly teo amin'ny faha-84 taonany i Ahmed Fouad Negm, ilay Ejiptiana poetin'ny Revolisiona. Mitomany noho ny fahafatesany ireo mpisera anaty aterineto manerana ny tontolo Arabo.
Nohosorana ho toy ny “Poetin'ny vahoaka” ao Ejipta, i Negm, izay matetika no nisy niantsa tao an-kianja Tahrir ny tononkalony, terana ivon'ny Revolisiona Ejiptiana, dia nandany 18 taona tamin'ny androm-piainany tany am-ponja. Anisan'ireny ny 11 taona nolaniany tany ambadikin'ny fefy vy nanesonesoana ny kabary tao amin'ny fahitalavitra nataon'ny filoha tamin'izany, Amwar Sadat.
Ny tononkalony, Ny lehilahy sahy no sahy, novakiana tao Tahrir, mivaky hoe :
Ny lehilahy sahy no sahy
Ny kanosa dia kanosa eny foana
Tongava hiaraka amin'ireo sahy
Miaraka ao an-Kianja
Nanoratra tamin'ny tenim-paritra Ejiptiana i Negm, ary velona mandrakizay any anatin'ireny hira politika ireny ny asa-sorany, nosoratana ho an'ny mahantra sy ny sarangan'ny mpiasa, avy amin'i Sheikh Imam.
Nitazona kaonty Twitter iray i Negm izay nanohizany nanely ny feon'ny fieritreretany momba ny revolisiona hatramn'ny farany, matetika miara-mirona amin'ireo mpisera anaty aterineto.
Zeinobia, ao amin'ny “Egyptian Chronicles”, mibilaogy hoe :
Nolavin'i Negm andritry ny androm-piainany ny ho poety mpitondra tenin'ny fitondràna fa notsindriany kokoa ny maha-feon'ny mahantra sy ireo iharan'ny tsindry hazo lena azy ary heveriko fa io no antony hahatsiarovana azy bebe kokoa noho ireo poety hafa amin'izo vainm-potoanantsika izao.
Ahmed Fouad Negm no nandao fa ny tononkalony sy ny hirany kosa mitoetra satria ireo teny milaza fiovàna dia tsy eto Ejipta ihany fa manerana ny tany.
Ao amin'ny Twitter, firaisam-po miraradraraka no hita eo ambanin'ny tenifototra #أحمد_فؤاد_نجم [ar], na Ahmed Fouad Negm.
Manoratra ilay Ejiptiana Mahmdouh Hamza hoe :
Very singa iray i Ejipta. Andriamanitra anie hamindra fo amin'ilay lehilahy faran'izay madio sy marina, ilay poetin'ny revolisiona mitohy : Ahmed Fouad Negm.
Sherif Amer, Ejiptiana mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra, mibitsika hoe [ar]:
Mpifanandrina tamin'ny filoham-pirenena i Ahmed Fouad Negm. Ny tsy maha-eo intsony an'i Negm izao no ho olan'izay filoha manaraka eo. An'arivony maro no hamerimberina ny asa sorany manoloana ireo olona an-tapitrisany. Andriamanitra anie hamindra fo amin'izay mbola tavela sy iray nandao.
Avy any UAE, Abdulla Al Neaimi, mpanoratra, manampy hoe :
Maro no miampanga an'i Ahmed Fouad Negm ho marary saina. Mbola hitako ho matotra lavitra noho ny an'ireo poety milamin-tsaina aza ny fomba fijeriny.
Azmi Bishara, Palestiniana, manamarika hoe :
Poetin'ireo noporetina sy ireo misedra ny tsy rariny izy, sady na izy koa aza natao an-jorom-bàla. Rehefa tonga saina amin'ny tsy rariny manjo azy ny olona, dia lasa poetin'ny vahoaka izy. Niatrika izany i Ahmed Fouad Negm tamin'ny androm-pahavelomany.
Ary i Mourid Barghouti, Palestiniana poety, dia mitenyfa hitohy hanelingelina ireo mpanao jadona i Negm – amin'ny alàlan'ny tononkalony – na dia aorian'ny nahafatesany :
Ahmed Fouad Negm: mbola hanohy hanelingelina an-dry zareo avy any amin'ny misy anao any ianao. Veloma ry namako.
Natrehan'olona an'arivony maro ny fandevenana azy tao Kairo, Ejipta. Zeinobia, Ejiptiana bilaogera, dia manambatambatra fantina avy amin'ny Storify mikasika ny fandevenana an'i Negm, eto.
Al Jazeera: Ahmed Fouad Negm: Manoratra Revolisiona [ang]
Ny sasany amin'ireo tononkalon'i Negm ka efa voadika ho teny Anglisy dia azonareo jerena ato